Androidsis bu ebe nrụọrụ weebụ AB Internet. Na weebụsaịtị a, anyị na-elekọta ịkọ akụkọ niile gbasara gam akporo, nkuzi zuru oke na nyocha ngwaahịa ndị kachasị mkpa na mpaghara ahịa a. Ndị otu edere ederede nwere obi uto banyere ụwa gam akporo, na-elekọta ịkọ akụkọ niile na mpaghara ahụ.
Kemgbe ọ malitere na 2008, Androidsis abụrụla otu n'ime weebụsaịtị ndị na-ekwu okwu na mpaghara ama ama gam akporo.
Androidsis isiokwu otu mejupụtara otu ìgwè Ndị ọkachamara na teknụzụ gam akporo. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso n’otu otu, ị nwere ike zitere anyị fọm a ka ị bụrụ onye ndezi.
Amuru na Barcelona, ​​Spain, amuru m na 1971 ma enwere m obi uto banyere komputa na mkpanaka di iche iche. Sistemụ arụmọrụ m kachasị amasị m bụ gam akporo maka ekwentị mkpanaaka na Linux maka laptọọpụ na desktọọpụ, ọ bụ ezie na m na-eme nke ọma na Mac, Windows, na iOS. Ihe niile m maara banyere sistemụ arụmọrụ ndị a m mụtara na ụzọ m kụziri, na-achịkọta ihe karịrị afọ iri nke ahụmịhe n ’ụwa nke gam akporo ekwentị mkpanaaka!
Onye edemede na onye editọ ọkachamara na gam akporo na ngwa ya, smartphones, smartwatches, wearables, na ihe ọ bụla metụtara geek. M gbakasịrị ụwa nke teknụzụ kemgbe m dị obere na, kemgbe ahụ, ịmatakwu banyere gam akporo kwa ụbọchị bụ otu n'ime ọrụ m kacha atọ ụtọ.
Tupu m banye n'ahịa ahịa ama ama, enwere m ohere ịbanye na ụwa PDA mara mma nke Windows Mobile na-achịkwa, mana ọ bụghị tupu enwere m obi ụtọ, dị ka dwarf, ekwentị izizi m mbụ, Alcatel One Touch Easy, mobile nke nyere ohere ịgbanwe batrị maka batrị alkaline. Na 2009, ewepụtara m ekwentị m jikwaa gam akporo, ọkachasị HTC Hero, ngwaọrụ nke m ji obi ụtọ dị ukwuu. Kemgbe ugbu a, ọtụtụ smartphones agafeela aka m, agbanyeghị, ọ bụrụ na m ga-anọnyere onye nrụpụta taa, ahọrọ m Google Pixels.
Amalitere m gam akporo nwere HTC Dream weghachite n’afọ 2008. A mụrụ m agụụ mmekọahụ kemgbe afọ ahụ, nwere ihe karịrị ekwentị 25 na sistemụ arụmọrụ a. Taa m na-amụ mmepe nke ngwa maka usoro dị iche iche, gụnyere gam akporo.
Ekwentị mbụ m bụ HTC Diamond nke m wụnye gam akporo. Site n'oge ahụ ahụrụ m usoro sistemụ Google n'anya. Na, mgbe m na-ejikọ ọmụmụ m, enwere m ọ passionụ oke agụụ m: telephony mkpanaka.
Hooked na bundled kemgbe ... mgbe niile! ya na uwa gam akporo na umu anumanu di egwu gbara ya gburugburu. Ana m anwale, nyochaa ma dee banyere smartphones na ụdị ngwaọrụ gam akporo dakọtara, akụrụngwa na ngwaọrụ. Na-agbali "ịnọ", mụta ma na-esochi akụkọ niile.
Na-enyocha ụdị ngwaọrụ gam akporo niile kemgbe 2010. Ọ dị mkpa ịmara omimi nke ọma na teknụzụ iji nwee ike ibunye ha ndị na - agụ ya. "Ọ bụghị ihe niile bụ nkọwa, na igwegharị ga-enwerịrị ahụmịhe" - Carl Pei.
Nwalee gam akporo kemgbe oge ochie, mmasi m nwere na sistemụ arụmọrụ Google na-eduga m n'ịchọ ịnwale ngwaọrụ niile m nwere ike imeli. Ọ na-amasị m iji ha atụnyere, mara njirimara ha nke ọma, ma chọpụta ihe niile ha na-enye.
Na ịhụnanya Android na afọ ole na ole ejirila sistemụ dị iche iche na smartphones. Ebe ọ bụ na akpọrọ ya aha ice cream ma ọ bụ mkpụrụ osisi mịrị amị, ekwere m onwe m nkwa na m gaghị ahapụ gam akporo. Enwere m mmasị na teknụzụ ma na-agbaso akụkọ niile.
Amstrad meghere m ọnụ ụzọ nke teknụzụ yabụ yabụ m na-ede banyere gam akporo karịa 8 afọ. Echere m na m bụ ọkachamara gam akporo na m hụrụ n'anya ịnwale ngwaọrụ dị iche iche na-etinye sistemụ arụmọrụ a.
Ingga njem, ide ihe, ịgụ na sinima bụ nnukwu agụụ m, mana ọ nweghị nke m ga-eme ma ọ bụrụ na ọ bụghị na ngwaọrụ gam akporo. Enwere m mmasị na sistemụ arụmọrụ Google kemgbe mmalite ya, enwere m mmasị n'ịmụta na ịchọtakwu ihe banyere ya, kwa ụbọchị.
Ijikọta teknụzụ ọhụrụ na agụụ m maka gam akporo, na -ekọrịta ihe ọmụma na ahụmịhe m maka OS a mgbe ị na-achọpụta ọtụtụ atụmatụ ya, bụ ahụmịhe m hụrụ n'anya.
Enwere m mmasị na ị na-arụ ọrụ na teknụzụ ọhụụ n'ozuzu ya na gam akporo. Ọ masịrị m nke ukwuu site na njikọ ya na ngalaba agụmakwụkwọ na agụmakwụkwọ, yabụ enwere m ọ discoverụ n'ịchọpụta ngwa na ọrụ ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ Google metụtara mpaghara ahụ.
Abụ m omiiko banyere gam akporo. Ekwenyere m na ihe ọ bụla dị mma nwere ike ịkwalite, ọ bụ ya mere m ji eji oge m oge iji mata ma mụta maka sistemụ arụmọrụ a. Ya mere enwere m olileanya inyere gị aka ka ị zuo oke ahụmịhe gị na teknụzụ gam akporo.
Nkà na ụzụ na-atọ m ụtọ mgbe niile, mana ọbịbịa nke gam akporo smartphones na-eme ka m nwee mmasị na ihe niile na-eme n'ụwa. Nyocha, ịmata na ịchọpụta ihe ọhụụ banyere gam akporo bụ otu n’ime agụụ m.